COVID-19 Guide Jul 25, 2021
အိမ်တွင်းOxygen ကုထုံးလုပ်ဆေ... Aug 13, 2021
CoVid-19 လူနာများကို Oxygen ပေးရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို လေ့လာထားစေချင်ပါသည်။
ပုံမှန် လူတစ်ယောက်၏ သွေးထဲတွင် Oxygen သည် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်အထက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေဘူယျအားဖြင့် SpO2 ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်အောက် လူနာများကို Oxygen ပေးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အထူးသတိထားရန်လိုအပ်သည်မှာ အချို့လူနာများ (ဥပမာ− နာတာရှည် အဆုတ်ပွရောဂါသည်များ)တွင် SpO2 ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်အထက် ဆိုလျှင် Oxygen အများကြီးပေးရန် မသင့်ပါ။
ပုံမှန်ရှူသွင်းနေသော လေထဲတွင် Oxygen သည် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါသည်။ ယျေဘုယျအားဖြင့် Oxygen ၁ လီတာပေးလျှင် ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးစေသည်။ ဥပမာ (ပုံ-၁) : Oxygen ၃ လီတာပေးသောအခါ လူနာရှူသွင်းနေသော လေထဲတွင် Oxygen ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးသွားစေသည်။ ၁၀ လီတာပေးသော် လူနာရှူသွင်းနေသော လေထဲတွင် Oxygen ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် ပါဝင်သွားစေသည်။
ထို့ကြောင့် လူနာကို Oxygen ဘယ်လောက်ပေးသင့်သည် ဆိုသည်ထက် လူနာရှူသွင်းနေသော လေတွင်ပါ၀င်သော Oxygen ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ရောက်စေချင်သည် က ပို၍အဓိကကျပါသည်။
ဥပမာ(၁) - လူနာ၏ SpO2 ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်နေချိန်တွင် ကိုယ်က Oxygen ၁ လီတာပေး၍ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သွားလျှင် ထိုလူနာအတွက် ၁ လီတာ ပေးထားခြင်းက လုံလောက်ပါသည် ။ ထပ်တိုး၍ပေးရန်မလိုပါ ။
ဥပမာ(၂)- အကယ်၍ လူနာ၏ SpO2 ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်နေချိန် ကိုယ်က ၃ လီတာပေး၍ ထိုလူနာ၏ Oxygen ရာခိုင်နှုန်း မှာ ၉၀ (သို့မဟုတ်) ၉၀ အထက်ဖြစ်သွားလျှင် ထိုလူနာအတွက် ၃ လီတာ ပေးထားခြင်းက လုံလောက်ပါသည်။
ဥပမာ(၃) - အကယ်၍ ၃လီတာ ပေးသော်လည်း ထိုလူနာ၏ SpO2 သည် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း ပဲ ဖြစ်နေလျှင် ကိုယ်က Oxygen ကို တိုး၍ပေးရမည်။ ဥပမာ− Oxygen ၃လီတာ မှ ၅ လီတာ ပြောင်း၍ပေးထားချိန် တွင် လူနာ၏ SpO2 ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သွားလျှင် ထိုလူနာကို ၅ လီတာ ထား၍ ပေးရသည်။
Oxygen ကို ဘယ်လိုပိုက်ဖြင့် ပေးရမည်နည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းလည်း ရှိသေးသည်။
ပိုက်နှင့် Mask အမျိုးအစား
၁ လီတာမှ ၄ လီတာထိ
Nasal Prong/Nasal Cannula - Oxygen ၁ လီတာမှ ၄ လီတာထိ ဆိုလျှင် Nasal Prong/Nasal Cannula ဟုခေါ်သော နှာခေါင်းအဝ မှာထားရသည့် Oxygen ပိုက်ကို သုံးနိုင်သည်။
Venturi Mask - Oxygen ၄ လီတာ နှင့် အထက်ဆိုလျှင်တော့ Venturi Mask ဟုခေါ်သော Oxygen ကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ချိန်၍ ပေးနိုင်သည့် နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကို အုပ်သော Mask က ပိုသင့်လျော်သည်။
Face Mask - Venturi Mask မရလျှင်တော့ Face Mask ကိုသုံးနိုင်သည်။ Venturi Mask နှင့် Face Mask နှစ်ခုလုံးသည် နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကို အုပ်ထားကာ Oxygen ပေးတာချင်းတူသည်။ *သို့သော် Venturi Mask တွင် Oxygen ဘယ်လောက် လီတာ (သို့) % ပေးနိုင်သည့် ချိန်ဆတံလေး ပါပါသည်။
Non-Rebreathable Mask - တကယ်လို့ Oxygen ကို ၁၀ လီတာ နှင့် အထက် ပေးရတော့မည်ဆိုလျှင် Non-Rebreathable Mask ဟုခေါ်သည့် လေအိတ်ပါ ပါသည့် နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ် အုပ်ပါသည်ကို သုံးသင့်သည်။
Image source: https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2021/06/Common-O2-delivery-devices-bwkwqc.pdf
Oxygen ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာပေးသင့် ပါသလဲဟု မေးလျှင်….
လူနာ ဘယ်လောက် အခြေအနေ တိုးတက် ဆုတ်ယုတ်သလဲ ပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာ− ၁၀ လီတာပေးထားသော လူနာတွင် ကိုယ်က ၈ လီတာပေး၍ ထိုလူနာ၏ ကိုယ်မှန်းထားသော SpO2 ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အောက်ကျသွားလျှင် ထိုလူနာကို ၁၀ လီတာသာ ဆက်ပေးသင့်သေးသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်က ၈ လီတာ ပေးချိန် လူနာ၏ SpO2 ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အောက် မကျသွားလျှင် Oxygen ကို ၈ လီတာ ပေး၍ရသည်ဟု အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ယျေဘုယျ အားဖြင့် လူနာအခြေအနေ တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်လျှင် ၁၂ နာရီခြား (သို့) တစ်ရက် တစ်ခါ ကိုယ်ပေးသော Oxygen ကို လျော့၍ ပေးခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့လျှော့နေချိန်တွင် လူနာ၏ Oxygen မကျသွားလျှင် (သို့) လူနာမမောလျှင် လျှော့လိုက်သည့် Oxygen Level ၌ လူနာကိုထားနိုင်သည်။
Oxygen ပေးခြင်းအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်သောအရာများ၊ စာသားများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်များထံ လင့်ခ်များနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများ ("ပါဝင်သောအရာများ") သည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးမှု၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကုသမှုကို အစားထိုးရန် မရည်ရွယ်ပါ။ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အခြား ကျန်းမာရေေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ အကြံဉာဏ်ကို အမြဲတောင်းခံပါ။
Care Diary Medical Team
The app created for you, for me and for society.
Building 9B Room E-1 Yaw Min Gyi Quarter, Nawaday Street, Dagon Township, Yangon.
Copyrights © 2020 by Care Diary.